အမျိုးအစား: Anti-တွန့်စက်, Anti-တွန့်စက်, hifu
လျှောက်လွှာ: မျက်နှာဓာတ်လှေကား, ရှုံ့ဖယ်ရှားရေး
Length: 5.0-25mm (1.0mm / ခြေလှမ်း)
Spacing: 1.0-10mm (0.5 မီလီမီတာ / ခြေလှမ်း)
ထဲကပါဝါ: 0.2-2.0J (0.1J / အဆင့်)
Input ကိုဗို့အား: AC အ 100V-230V
ကို Power: <160VA
အမြင့်မုန်တိုင်းအဆင့် ultrasound (HIFU) တိုက်ရိုက်အသားအရေနှင့်လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးအရေပြားရဲ့ကော်လာဂျင်နဲ့အရှင်အကျိုးဆက်ဟာ texture တိုးတက်အောင်နှင့်အရေပြား sagging လျှော့ချနိုင်သည်ကိုအရေပြားအောက်ဆုံးတစ်သျှူးမှအပူစွမ်းအင်ကိုကယ်တင်တတ်၏အာရုံစူးစိုက်။ ဒါဟာစာသားထိုမှတပါး, ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်ဆုကြေးမျှမကျချိန်လည်းမရှိကြောင်း, တစ်ဦးအသွင်အပြင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ရလဒ်တစ်စုံတစ်ရာထိုးဖောက်ခွဲစိတ်သို့မဟုတ်ထိုးဆေးမပါဘဲအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီရရှိ။
ဒီနည်းပညာလေဆာနှင့်ပြင်းထန်သောသွေးခုန်နှုန်းအလင်းအိမ်၏မတူဘဲအတွက်ကအားလုံးကိုအသားအရေအရောင်အဆင်း၏လူတို့အဘို့အညီအမျှကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, မျက်နှာအဖြစ်တကိုယ်လုံးမှလျှောက်ထား, စနိုင်ပါသည်။
13MM FAT ဖယ်ရှားရေး
မြင့်မားသောပြင်းထန်မှု Apply အာရုံစိုက်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့ cellulite ကိုချိုးဖျက်ဖို့ cellulite သို့ deeoer သွားပါ, ultrasound အာရုံစူးစိုက်။ ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်ဝမ်းဗိုက်နှင့်ပေါင်အဘို့, အဆီလျှော့ချဖို့, ထိုးဖောက်အထင်ကြီးခြင်းနှင့် long- နောက်ဆုံးထိရောက်သော tratement ဖြစ်ပါတယ်။
မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုဇီဝြဖစ်၏ဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုပုံကုသမှုစဉ်အတွင်းဆီဥကိုဖြေရှင်းရန်မြင့်မားသောစွမ်းအင်နှင့်ကောင်းသောထိုးဖောက်မှုနှင့်အတူ triglyceride နှင့်ဖက်တီးအက်ဆစ်မစင်ပေါင်းစပ်ခြင်း, အဆီတစ်သျှူးတက်အပူ, 13mm (ထိုးဖောက်မှု၏အတိမ်အနက်ကို) ၏အဆီမှာ ultrasound ပစ်မှတ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း, အဆိုပါ vessal နှင့် nurve ပျက်စီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
စွမ်းအင် high- transmit ဖို့အသုံးပြု 1. DS-4.5D 4MHZ ကြိမ်နှုန်းဖို့ပစ်မှတ်ထား "အပူခဲ" ဒေသဆိုင်ရာ, ဖွဲ့စည်း,, အရေပြားတိုက်ရိုက်အရေပြားအောက်ဆုံး SMAS အလွှာ 4.5mm အနက်မှအရေပြားကိုထိုးဖောက်ဖို့ ultrasound အရေပြားအောက်ဆုံးတစ်သျှူး ultrasound အာရုံစူးစိုက် ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုပါးအဖြစ်ထူအရေပြား,
2. DS-4.5S 7MHZ High-စွမ်းအင်အရေပြားမှ ultrasound အာရုံစူးစိုက်ထုတ်လွှင့်ဖို့အသုံးပြုကြိမ်နှုန်း, အရေပြားအောက်ဆုံးတစ်သျှူး, 4.5mm အနက်မှအရေပြားကိုထိုးဖောက်ဖို့ ultrasound, ထိုကဲ့သို့သောနဖူးအဖြစ်ပိုမိုပါးလွှာအရေပြားကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ရိုက်အရေပြားအောက်ဆုံး SMAS အလွှာ, ပါးလွှာသောနှင့်လည်ပင်း။
3. DS-3.0 8 MHz မြင့်မားအကြိမ်ရေထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အရေပြားတစ်သျှူးများ၏အရေပြားအလည်လွှာအလွှာသို့ ultrasound စွမ်းအင်အာရုံစူးစိုက်, 3.0mm အနက်မှအရေပြားကိုထိုးဖောက်ဖို့ ultrasound, ကော်လာဂျင်၏အသားအရေရဲ့အခါအသားအရေအလွှာကိုသက်ဝင်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ပါသည်, ထိထိရောက်ရောက်မြှင့်တင်ရန် ထိုအကြမ်းဖျင်း၏စုစည်းပြီး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, ဒါပေမယ့်လည်းကြီးမားတဲ့အပေါက်တိုးတက်စေခြင်းနှင့်အရေးအကြောင်းတွေ၏အသွင်အပြင်လျှော့ချပေးပါတယ်။
4. DS-1.5 High-စွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်ဖို့အသုံးပြု 10MHZ ကြိမ်နှုန်းဟာအရေပြားအပေါ်ယံတစ်ရှူးမှ ultrasound အာရုံစူးစိုက်, 1.5mm အနက်မှအရေပြားကိုထိုးဖောက်ဖို့ ultrasound, ပိုမိုပါးလွှာတစ်သျှူးအတွင်းအရေပြားအရေပြားအပေါ်ယံကိုသက်ဝင်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
5. MAT-13mm မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုကောင်ဆီဥကိုဖြေရှင်းရန်မြင့်မားသောစွမ်းအင်နှင့်ကောင်းသောထိုးဖောက်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်း, အဆီတစ်သျှူးတက်အပူ, 13 မီလီမီတာ (ထိုးဖောက်မှု၏အတိမ်အနက်ကို) ၏အဆီမှာ ultrasound ပစ်မှတ်အာရုံစူးစိုက်။
1. မယ့်အစား non-ထိုးဖောက် technique ကိုအတူရိုးရာခွဲစိတ်မျက်နှာဓာတ်လှေကား၏။
2. sagging နှင့်အိုမင်း၏အခြားနိမိတ်လက္ခဏာများတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, အရေပြား sagging ပြားကိုကြပ်။
အထူး transmitter ကို, အ SMAS အလွှာမှ High-စွမ်းအင်အာရုံစိုက် ultrasound ရဲ့အသားအရေမျက်နှာပြင် conduction ကနေထုတ်လွှင့်မှုနှင့်အတူ3။
4. SMAS ကျုံ့: ကော်လာဂျင်အသစ်ပြန်ပြုပြင် elastine ဖိုင်ဘာကျုံ့။
ထို့နောက် 5. တိုတောင်းသောအချိန်တွင်သို့မဟုတ် Sonic အထက် 65-70 ဒီဂရီအထက်သတ်မှတ်ထားသောပစ်မှတ်မျိုးစုံသောအပူချိန် "အပူရောဂါပျောက်ကင်း" ဧရိယာဖွဲ့စည်းမြင့်မားစွမ်းအင်အာရုံစိုက်ထုတ်လုပ်ရန်အရေပြားအလွှာမှာအာရုံဆဲလ်ခဲနေကြတယ်, ablation, မြန်ဆန်တိုးတက်မှု fascia, အောင်မြင်ရန် အလှကုန်ရှုံ့အကျိုးသက်ရောက်မှု
6. က Non-ထိုးဖောက်, ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်မအချိန်, ထိုးဆေးမပါဘဲ ultrasound မရှိခွဲစိတ်မရှိသဲလွန်စရှုံ့အသားအရေပြန်လည်နုပျိုခြင်း။
7. , ယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ်ဦးစလုံးမဆိုအသက်အရွယ်ကွက်တိ။
စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ် transmitter ကိုအရေပြား၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်အမျိုးမျိုး, အရေပြားအလွှာမှကူးစက် high-စွမ်းအင်အာရုံစိုက် ultrasound နှင့်အတူအသငျ့ 8. ။
0.1-0.259စီးပွားဖြစ်မြန်နှုန်းမြင့်ဂီယာနည်းပညာ။
တစ်အလွှာက high-တိကျစွာထုတ်လွှတ် transmitter ကို၏ 15000 လိုင်းများမှ Up ကို 10 အလွန်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်အလားတူတူရိယာသုံးကြိမ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အလွှာအသားအရေကုသမှုနည်းပညာနှင့်အတူကောင်းစွာကိုက်ညီသောတည်ငြိမ် output ကို 4-10MHZ ဘရော့ဘန်းနည်းပညာ၏ 11 သီးသန့်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။
12. လျင်မြန်စွာ & တိုတောင်းသောကုသမှုအချိန်: 30 မိနစ်တဦးတည်းမျက်နှာကုသမှု။
13. လူနာများ '' မြင့်သောစိတ်ကျေနပ်မှု။
14. အမြင့်အရည်အသွေး, အနိမ့်ကမြား။
------ HIFU ကုသမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း -----------
2. အားရစရာအသားအရေဧရိယာဓာတ်ပုံနှင့် Mart ကိုယူပါ။
အဆိုပါ transmitter ကိုနှင့်အရေပြားများအကြားတစ်ဦးစပယ်ယာအဖြစ် 3. Pt ဂျယ်။
4. မာကုထိုကဲ့သို့သောမေးစေ့, လည်ပင်း, လေယာဉ်နှစ်ဖက်စလုံးပတ်ပတ်လည်အဖြစ်ကုသဧရိယာ။
5. တစ်ဦးကချောမွေ့လက်အပိုင်းအစလုံခြုံစွာသတ်မှတ်ထားသောအတိမ်အနက်မှာအရေပြားအောက်ဆုံးအလွှာတက်တွင်စတင်အရာအလွန်အမင်းအာရုံစိုက် ultrasound စွမ်းအင်ကယ်တင်တတ်၏။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုရရှိနေတုန်းမသက်မသာသို့မဟုတ်နာကျင်ဖြစ်လာပါဘူးဒါကြောင့်လူနာအပူများ၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်။
ထိုမေးစေ့အာရုံကြော (မဖြစ်စလောက် mandibular အာရုံကြော) ၏အစွန်းနှင့် supraorbital ဘယ်တော့မှ (supra Orbital ဘယ်တော့မှ) ဧရိယာကိုရှောင်ကြဉ်ရန် 6. Pay ကိုအာရုံစူးစိုက်မှု။
ပြီးစီးပြီးနောက် 7. နှင့်မျှပြန်လည်နာလန်ထူကာလ, အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်ကိုသုံးပါနှင့်-Up စေနိုင်သည်။
8. ရုံတခါ, အပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်မှုတဖြည်းဖြည်း 2-3 လကြာအချိန်အတွင်း aprear ပါလိမ့်မယ်။
9. ultrasound အသားအရေတင်းကျပ်နှင့် elasticity ၏ရလဒ်များကိုအသစ်ကကော်လာဂျင်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအဖြစ်အောက်ပါ2-3 လအတွင်းတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
10. ဒီကုသမှုကိုအောက်ပါအဘယ်သူမျှမကျချိန်ရှိပါသည်။ တချို့ကလူနာအရေပြားပျော့နီခြင်းကိုခံစား, သို့သော်ဤယာယီဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အထိ9လအတွင်းအဘို့တိုးတက်စေရန်ဆက်လက်။ ရလဒ် 1 နှစ်ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။
input ဗို့အား AC အ 100V-230V 50Hz-60Hz
output ပါဝါ 2.0J (0.1J / အဆင့်) မှ 0.2
spacing 10 မီလီမီတာ (0.5mm / အဆင့်) မှ 1.0
focal ရှည် 25mm (0.5mm / အဆင့်) မှ 5.0
စက်အတူပါလာဘယ်နှစ်ယောက် transducers 1. ?
တစ်ဦးချင်းစီ tranducer များအတွက် 2. ဘယ်နှစ်ယောက်ရိုက်ချက်များ?
မျက်စိ, မျက်နှာ, လည်ပင်း, ရင်ဘတ်, ခန္ဓာကိုယ်။
ယခင်: New Fashion Design for Liquid Dermabrasion Machine - Thermage RF fractional Micro needle machine for skin U-MR18-2S – URBEAUTY
နောက်တစ်ခု: ဒေါင်လိုက် 800w 808nm diode လေဆာအမြဲတမ်းဆံပင်ဖယ်ရှားရေးစက် U-808
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ရှိသည်။ အိမ်ရှင်စက်အပေါ် 12 လအာမခံပေးထားသည်။ လက်ကိုင်, ကုသမှုအကြီးအကဲများ, နှင့်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့ခြောက်လအခမဲ့အစားထိုးအာမခံ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏အချိန်မီန်ဆောင်မှုများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာထောက်ပံ့အသင်းရှိသည်။ သင်ကသင်တယ်လီဖုန်းဖြင့်အချိန်အတွက်လိုအပ်အကူအညီနဲ့, webcam, အွန်လိုင်းချက်တင် (ဂူးဂဲလ်ဟောပြောပွဲ, Facebook, Skype ကို) ရနိုင်သည်။ စက်မဆိုပြဿနာရှိပါတယ်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ညွှန်ကြားချက်များနှင့်လျှောက်လွှာတွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံအသုံးပြုသူကို manual နှင့်အသုံးပြုမှုကိုဗီဒီယိုပေးနိုင်ပါသည်။ နှင့် 24/7 အွန်လိုင်းအတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုကိုသင်သမျှပြဿနာနှင့်သင်တွေ့ဆုံရန်အခါတိုင်း, သင်အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်အာမခံပါသည်။ ဒါဟာညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူမည်သူမဆိုလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
အဆိုပါစက်သည်သင်၏ငွေပေးချေမှုများ၏လက်ခံရရှိပြီးနောက် 2-3 ရက်အတွင်းတင်ပို့ပါလိမ့်မည်။
2d Hifu စက်
မျက်နှာ Slim စက်
1 ခုနှစ်တွင် Hifu 3
Hifu မျက်နှာ LIFT စက်
Hifu စက် Face Lift
Hifu အင်္ဂါဇာတ် rejuvenation
စက်တင်းကျပ် Hifu အင်္ဂါဇာတ်
ကိုရီးယား RF အလှအပစက်
အိတ်ဆောင် Hifu စက်
Professional က Face Lift Sono ဘုရင်မကြီး Hifu
ultra ခေတ် Hifu
ultra အရေပြား Hifu
V ကိုမက်စ် Hifu
အင်္ဂါဇာတ် Hifu တင်းကျပ်
Hifu မျက်နှာရှုံ့ဖယ်ရှားရေးမျက်နှာနှိပ်နယ်မီတာရုတ်သိမ်းပေးရန် ...